Mitarika olana samihafa izay misy fiantraikany eo amin’ny fiaianam-bahoaka ny kirizy politika nifanesy teto Madagasikara.
Kristianina vontom-pinoana no ilain’ny Fiangonana, vonona hanara-dia an’I Kristy handray anjara amin’ny fandrafetana ny Fanjakan’Andriamanitra ka hiaina FITIAVANA. Nahazo antso isika mba ho lalivay, ho fanasin’ny tany, ho fahazavana.Indrindra ho an’ny sokajin’olona madinika indrindra. Hanirahan’ny Fiangonana antsika ny hitondra fanovana manoloana ny fahasahiranana samihafa iainan’izy ireo. Mba hiverenan’ny fahamendrehana ny maha-zanak’Andriamanitra antsika. Hirotsaka sy hikatroka ao anatin’ny Fiangonana ka hiarahana amin’ny IRAY AINA. Mino isika fa izany no làlana mety, hanampy ny rehetra hanatanteraka ny iraka sy hahafahana manova ny fiainana ho tsara.
Fiforonan’ny Firohotana IRAY AINA sy ny zava-bita
Neken’ny Fivondronam-ben’ny Eveka hijoro ao amin’ny Fiangonana katolika ny IRAY AINA tamin’ny taona 1977. Ary nankalaza ny faha-40 taona nijoroany tany Nosy Be Helleville ny faha-23 ka hatramin’ny faha-26 ny volana aogositra 2017. Nahatratra 650 ny isan’ny mpikatroka avy amin’ny Diosezy 10 tafavory tamin’izany. Notronin’ny solontenan’ny mpikatroka ao amin’ny Firohotan’ny ankizy i IBALITA sy ny solontenan’ny tanora mpikatroka ao amin’ny Firohotana TAK na Tanora Mpiasa Kristianina, ny Firohotana roa ireo izay fianakaviambe iray.
Nifampizarana tamin’izany ny ezaka vita ka misy nataon’ny mpikatroka manokana. Misy kosa nifandrimbonana tamin’ny fikambanana na vondron’olona hafa anatiny sy ivelan’ny Fiangonana. Isan’izany ny Sendika, ny Fikambanana Asa Sosialy sy Fampivoarana toy ny CDD ao Antsiranana, ny BUCAS Antananarivo, ny BIMTT.Eo koa ny sehatra ara-panjakana toy ny Fokontany, ny Kaominina ary ny fangatahana fanelanelanana samihafa manoloana ny olana nahazo ny Mpiasa amin’ny toeram-piasana samihafa. Raisina ohatra amin’izany ny olana nahazo ny Mpiasan’ny Sirama Ambilobe tamin’ny taona 2006. Ka mbola tsy nahazo karama am-bolana maro noho ny fitsaharan’ny fiodinan’ny orinasa.
Nisy ny vokatra tsara azo vokatr’ireny fitakiana sy firaisankina niainana tamin’ny tsara sitra-po, nanaiky hifandrimbona hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Sehatra handraisana fiofanana ny Firohotana IRAY AINA na ara-tsendikaly na ara-pivoarana momba ny famokarana na ho fiarovana ny zo fototra rehatra ary anisan’izany ny momba ny fananan-tany sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny harena an-kibon’ny tany.
Ny ohabelona nifampizarana no nahatsapana fa mitondra fiovan’ny toe-tsaina ny dinika hifanaovana ao amin’ny ekipa fototra IRAY AINA izay mijery akaiky ny olana misy eo amin’ny sokajin’ny Mpiasa rehetra ary mampivelatra ny saina hitodika amin’ny hafa ho fanatsarana ny asa velontena.
Nandritry ny fankalazana ny faha-40 taonan’ny nijoroan’ny IRAY AINA tany Nosy Be io koa dia nisy valandresaka notanterahan’Andriamatoa ZABOFIGERA Dox Didier izay mpahay lalàna (juriste publiciste) ka ny lohahevitra niaingana dia ny hoe: “DEMOKRASIA SY FAHAIZA-MITANTANA”. Miainga ao an-tokantrano hoy izy ny fiainana izany satria samy tompon’andraikitra ny mpivady hisian’ny mangarahara eo amin’ny fitantanana ny tokantranony. Ny fanabeazana tsara omen’ny ray aman-dreny ny taranany dia manefy ny tanora ho tonga olom-pirenena vanona ho tompon’andraikitra mahatoky eo amin’ny adidy raisina eo anivon’ny Fiangonana sy ny Firenena. Ny tokantrano no taniketsa ampaniriana ny Fitiavana, ny Fahamarinana ka hahazoana olom-pirenena vanona lavitry ny kolikoly sy ny fanambakana ny hafa. Izay fototry ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ankehitriny.
Marihina fa nanatrika io valan-dresaka io Rosario VELLA, Evekan’ny Diosezin’Ambanja. Nankasitraka ny ezaka vitan’ny IRAY AINA izy ary nankahery hitohizan’ny fikatrohana. Nanambara fa manara-maso ny fiainam-bahoaka ny Fiangonana ary miresaka amin’ny olom-boafidy mihitsy raha misy hitan’izy ireo fa ilaina izany. Ary manome hafatra koa an-taratasy amin’ny maha-Ray aman-dreny miahy ny ondriny.
Nanatrika io valan-dresaka io ny olomboafidy tao an-toerana dia ny solombavam-bahoaka Andriamatoa JAOSERA Irénée. Nanazava momba ny andraikitry ny maha-samihafa ny olomboafidy sy ny olomboatendry satria matetika mifanitsaka ny asan’ireo. Solontenam-panjakana ny olom-boatendry ka manara-maso ny fizotry ny fiainam-bahoaka. Fa ny olom-boafidy kosa toy ny Ben’ny tanàna no tompon’andraikitra amin’ny fampivoaram-piainan’ny vahoaka hiadidiany. Ny solombavam-bahoaka kosa no mandany ny lalàna momba ny teti-bola fa misy kosa ny famoaham-bolam-panjakana tsy mandalo ao amin’ny antenimieram-pirenena ny fandaniana azy. Toa ny fanomezana ny tambin-karaman’ny filoham-pokontany. Nanamarika ny mpihaino fa tsy ara-dalàna ny fanomezana io tambin-karama io. Sady tara be no misy fitongilanana. Ao no tsy mandray afa-tsy 10 000 ariary isam-bolana. Nefa misy no mandray 60 000 ariary. Ny asa anefa mafy sady maka fotoana be, ny andraikitra anefa sarotra. Ilaina ny fanovana an’izany.
Nomarihina tamin’ny lamesa notarihin’I Eveka Rosario VELLA ny fanombohana ny fankalazana ny faha-40 taonan’ny IRAY AINA. Ary nofaranana tamin’ny Sorona Masina Lehibe nankalazain’ny pretra mpiara-dia tonga niara-paly sy nifanotrona tamin’ny mpikatroka. Ary teo ihany koa ny kristianina tao an-toerana nanamarika ny faha-26 aogositra. Ainga vao no hiatrehana indray ny taona manaraka. Ary efa miandrandra ny fankalazana ny faha-50 taona indray raha sitrapon’Andriamanitra.